LocalVox: Suuqgeynta Ganacsiga Yaryar iyo Kuwa Yar | Martech Zone
Waxaa jira in ka badan 100 milyan oo raadinta maxalliga ah maalintii 88% ka mid ahi way soo wacaan ama u tagaan ganacsiga noocaas ah 24 saacadood gudahood! LocalVox waa suuq maxalli ah, bulsheed, iyo moobiil suuq geyn ah oo ka caawiya ganacsiyada maxalliga ah inay iskaga suuq gashadaan khadka tooska ah, isku xidhka shabakadaha daabacayaasha, warbaahinta bulshada, raadinta, moobiilka, joornaalada emaylka ah & xitaa boggeeda u gaarka ah - waana u fududahay adeegsiga emaylka.
LocalVoxIsku darka tikniyoolajiyadda iyo taageerada ayaa ku habboon ganacsiyada yaryar ee doonaya inay furfuraan qiimaha suuqgeynta maxalliga ah. Astaamaha waxaa ka mid ah:
Isgaarsiinta - Waxay fududeyneysaa inaad kula xiriirto macaamiishaada hadda jira emayl, warbaahinta bulshada iyo moobiilka - dhammaantoodna adigoo riixaya hal badhan.
SEO-ga deegaanka - waxay kaa caawineysaa inaad hesho macaamiil cusub adoo ku wanaajin doona sida aad ugu kala sareeyso Google, Google+ iyo boqolaal tusayaal maxalli ah sida Yelp, CitySearch, Yahoo, Bing iyo kuwo kaloo badan.
mobile - Waxay abuurtaa degel wareega oo ay ku daabacdaa cusbooneysiinta websaydhkaaga si otomaatig ah si ay gacan uga geysato beddelaadda macaamiisha cusub una siiso macaamiisha jira sabab ay dib ugu soo noqdaan.
Maareeyaha Guud - Si otomatig ah ula soco sumcaddaada bulshada si aad u hesho emayl wakhti kasta oo aad u baahato inaad kaga jawaabto dib-u-eegista Yelp ama CitySearch, faallooyinka Facebook ama jawaabta Twitter.
Heshiisyada - Ku kaxee macaamiisha cusub adigoo bartilmaameedsanaya dadka kuugu dhow taleefannadooda gacanta oo leh dalabyo aad ku kaydinayso dhammaan dakhliga.
Warbixinta - Waxay ku siineysaa warbixinno bille ah oo aad ku fahmi karto mitirro micnaheedu yahay ganacsi.
Hel a Warbixinta bilaashka ah ee SEO-ga 'LocalVox' and find out where your business isn't being found!
Tags: AnalyticsEmail Marketingmaxalliga ahmarketing mobileheshiisyada internetkaMedia Social Suuq
Taasi waa wax aad u fiican, laakiin waxaan doonayay inaan wax badan ka ogaado "isgaarsiinta".